Flake Ice Machine, tube Ice igwe, Ice igwe maka ọrịre - Herbin Ice Systems
Ndị ọkachamara tụkwasịrị obi
Kacha ọhụrụ na Ngwaahịa
Ndị a bụ ngwaahịa ndị ọhụrụ dị n'ịntanetị nwere ọrụ zuru oke yana mmesi obi ike zuru oke
Guzobe na 2006
A hụrụ Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd na 2006. Ọ na-elekwasị anya n'ịkwalite teknụzụ igwe akụrụngwa kemgbe, gụnyere flake ice igwe, igwe igwe ice, gbochie igwe igwe na ihe ndị ọzọ
Anyị na-arụ oké ọrụ na OEM / ODM maka flake ice evaporators, flake ice igwe, tube ice igwe, gbochie ice igwe. Ngwaahịa anyị bụ ndị ndị azụmahịa anyị na-anabata nke ọma gburugburu ụwa.
Ọrụ na-eje ozi
Anyị na-arụpụta ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na China, anyị na-erekwa ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ọtụtụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ igwe ice ice, ndị jikọtara Herbin evaporators na nke ha nwere obi jụrụ oyi iji mee igwe igwe na-acha uhie uhie na mpaghara na mba dị iche iche gburugburu ụwa.
Ihe kariri 60% nke igwe ice flake na-akwadebe na Herbin flake ice evaporators.
Ejirila herbin flake ice evaporators ụwa ebe niile.
2T flake ice igwe
My ọkọlọtọ 2T / ụbọchị flake ice osisi onwem na 500kg ice nchekwa biini. Igwe mmiri a nwere ike ịchekwa 500kgs nke ice flakes. Ndị ahịa nwekwara ike ịhọrọ nnukwu nchekwa nchekwa ice, ma ọ bụ ime ụlọ ice. Na nnukwu ọnụ ụlọ ice, anyị ga-eji etiti ígwè kwado igwe akpụrụ mmiri, na etiti nchara ahụ ga-ebu ibu niile nke igwe akpụrụ. Ime ụlọ ice dị n’okpuru igwe akpụrụ mmiri. Ice flakes na-adaba n'ime ime ụlọ akpụrụ ma debe ya n'ime-akpaghị aka. Nke a bụ nhazi ihe osise iji gosi igwe igwe ice m 2T / ụbọchị.
3T flake ice igwe
Standardkpụrụ m nke 3T / day flake ice na-akwadebe ihe nchekwa nchekwa ice 1500kg. Igwe mmiri a nwere ike ịchekwa 1500kgs nke ice flakes. Ndị ahịa nwekwara ike ịhọrọ nnukwu nchekwa nchekwa ice, ma ọ bụ ime ụlọ ice. Ime ụlọ ice dị nnukwu ịchekwa flakes ice niile emere na abalị oge site na igwe igwe 3T / day flake. Anyị ga-eji ekike igwe kwado igwe akpụrụ mmiri, igwe akwa ahụ ga-ebukwa ibu niile nke igwe akpụrụ. Ime ụlọ ice dị n’okpuru igwe akpụrụ mmiri. Ice flakes dara n'ime ụlọ ice ma debe ya ...
5T flake ice igwe
Standardkpụrụ m nke 5T / day flake ice na-edozi 2500kg ice nchekwa. Akpụrụ ahụ nwere ike ịchekwa 2500kgs nke ice flakes. Ime ụlọ ice dị nnukwu ịchekwa flakes ice niile emere site n'abalị site na igwe ice ice 5T / day. Ndị ahịa nwekwara ike ịhọrọ ime ụlọ ice buru ibu. Anyị ga-eji ekike igwe kwado igwe akpụrụ mmiri, igwe akwa ahụ ga-ebukwa ibu niile nke igwe akpụrụ. Ime ụlọ ice dị n’okpuru igwe akpụrụ mmiri. Ice flakes dara n'ime ụlọ akpụrụ ma debe ya n'ime automa ...
10T flake ice igwe
20T flake ice igwe
Standardkpụrụ m 20T / ụbọchị flake ice na-eji 10,000kg ice nchekwa. Igwe mmiri a nwere ike ịchekwa 10,000kgs nke ice flakes. Ime ụlọ akpụrụ mmiri buru ibu iji chekwaa ice flakes niile emere n'abalị site na igwe ice 20T / day flake. Ndị ahịa nwekwara ike ịhọrọ ime ụlọ ice buru ibu. Anyị ga-eji ekike igwe kwado igwe akpụrụ mmiri, igwe akwa ahụ ga-ebukwa ibu niile nke igwe akpụrụ. Ime ụlọ ice dị n’okpuru igwe akpụrụ mmiri. Ice flakes dara n'ime ụlọ ice ma debe ya n'ime -...
30T flake ice igwe
Standardkpụrụ m 30T / ụbọchị flake ice na-akwado ya na nchekwa nchekwa ice 15,000kg. Igwe mmiri a nwere ike ịchekwa 15,000kgs nke ice flakes. Ime ụlọ ice dị nnukwu ịchekwa flakes ice niile emere n'ime abalị site na igwe igwe 30T / day flake. Ndị ahịa nwekwara ike ịhọrọ ime ụlọ ice buru ibu. Anyị ga-eji ekike igwe kwado igwe akpụrụ mmiri, igwe akwa ahụ ga-ebukwa ibu niile nke igwe akpụrụ. Ime ụlọ ice dị n’okpuru igwe akpụrụ mmiri. Ice flakes dara n'ime ụlọ akpụrụ ma debe ya n'ime -...
5T / day flake ice igwe na-eme 5 tọn ice flakes kwa ụbọchị, n'ime awa 24 ọ bụla. Anyị na-enye igwe igwe ice ice 5T / day. Elu àgwà na 2 afọ akwụkwọ ikike. Anyị raara onwe anyị nye flake ice igwe kemgbe 2009, na anyị igwe ekpuchi ọtụtụ nke European na American ahịa. Anyị na-atụ anya ijere gị ozi na teknụzụ ice na-echekwa ike. 5T / day flake ice igwe na-eme 5 tọn ice flakes kwa ụbọchị, n'ime awa 24 ọ bụla. 1. Ice mere anyị 5T / ụbọchị flake ic ...
Gbasara US ahịa Network Kpọtụrụ US Ọrụ